national microfinance laghubitta bittiya sanstha ltd(national microfinance laghubitta bittiya sanstha ltd) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
national microfinance laghubitta bittiya sanstha ltd
नेसनल माइक्रोफाइनान्सको सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीयी संस्थाले आज साउन १७ गतेबाट संस्थापक समूहको सेयर लिलामीमा राखेको छ। संस्थाले संस्थापक समूहको कुल ६५ हजार ७६० कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। यो लिलामी सेयरमा इच्छुक जोकाही व्यक्ति, कम्पनी, संघसंस्थाहरुले बोलपत्र पेस गर्न सक्ने छन्। लिलामी सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार २२...
नेसनल माइक्रोफाइनान्सद्वारा २१% बोनस सेयर सेयरधनीको डिम्याट खातामा जम्मा
काठमाण्डौ । नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको २१ प्रतिशत बोनस सेयर आफ्ना सेयरधनीहरुको डिम्याट खातामा जम्मा गरिदिएको छ। संस्थाले २०७७ फागुन १३ गतेसम्म सेयर अभौतिकीकरण गराएका सेयरधनीहरुको खातामा उक्त बोनस सेयर जम्मा गरिएको हो। उक्त अवधिसम्म भौतिक सेयर धारण गरेका सेयरधनीलाई शीघ्र सेयर...
नेसनल माइक्रोफाइनान्स र महिला सहयात्राको एकीकृत कारोबार असार ३० बाट
काठमाण्डौ । महिला सहयात्रा लघुवित्तलाई प्राप्ति गरेपछि नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले यही असार ३० गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएको छ। नेसनल माइक्रोफाइना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु हुन लागेको हो। यी दुवै लघुवित्तको गत जेठ २५ गतेसम्म आआफ्नो साधारणसभाबाट प्राप्ति प्रक्रियालाई...
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाण्डौ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थापक समूहअन्र्तगतको ७८ हजार १५० कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको छ। संस्थाले जारी गरेको सूचनाअनुसार गत असार ३ गतेबाट बिक्रीमा राखिएको उक्त संस्थापक सेयरको प्रतिकित्ता न्यूनतम मूल्य रु. १ हजार २२ रुपैयाँ तोकिएको छ । संस्थापक सेयर बोलकबोलका माध्यमबाट न्यूनतम १००...
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको ५० हजार कित्ता आजबाट लिलामीमा
काठमाण्डौ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज जेठ २७ गतेबाट ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको छ। संस्थाले लिलामीमा राखेको सेयरमा विद्यमान संस्थापकसहित जोकोही व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसस्थाले बोलपत्र पेस गर्न पाउँछन्। लिलामीमा राखिएको सेयरको न्यूनतम मूल्य १ हजार २२ रुपैयाँ तोकिएको छ। यसको मतलब...
महिला सहयात्रालाई प्राप्ति गर्न नेशनल माइक्रोफाइनान्सले डाक्यो विशेष साधारणसभा
काठमाण्डौ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले विशेष साधारणसभा डाकेको छ। संस्थाको हिजो आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विशेष साधारणसभा यही जेठ २५ गते डाकेको हो। सभा धादिङको धादिङबेसीस्थित संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले महिला सहयात्रा लघुवित्तलाई प्राप्ति...
नेशनल माइक्रोफाइनान्सले ८० हजार कित्ता सेयर लिलामीमा राख्ने, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ८० हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमार्फत बेच्ने भएको छ। संस्थाले यही जेठ १६ गतेबाट कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राख्ने भएको हो। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक वा जोकाही व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुले खरिद गर्न बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। लिलामीमा राखिने...
नेशनल माइक्रोफाइनान्सद्वारा अधिकांश वित्तीय सूचकमा छलाङ, नाफा कति ?
काठमाण्डौ । कोरोना कहरबीच पनि नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नाफा सतप्रतिशत बढीले बढाउन सफल भएको छ। आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ११८.९० प्रतिशतले बढी हो। गत...
नेशनल माइक्रोफाइनान्सले ५० हजार कित्ता वैशाख १३ बाट लिलामीमा राख्ने
काठमाण्डौ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमार्फत बेच्ने भएको छ। कम्पनीले यही वैशाख १३ गतेबाट जेठ १६ गतेसम्म संस्थापक सेयर लिलामीमा राख्ने भएको हो। यसका लागि धितोपत्र प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ। लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक तथा जोकोही व्यक्ति, कम्पनी र...
नेसनल माइक्रोफानान्सको ८० हजार कित्ता सेयर लिलामीमा, क–कसले दिन पाउँछन् आवेदन ?
काठमाण्डौ । नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ८० हजार कित्ता संस्थापक सेयर आज मंगलबारबाट लिलामीमा राखेको छ। कम्पनीले लिलामीमा राखेको सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार ६०० रुपैयाँ तोकेको छ। यसको मतलब लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम मूल्य वा सोभन्दा बढी बोलकबोल गरी बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। लगानीकर्ताले...
नेसनल माइक्रोफाइनान्सले ८० हजार कित्ता सेयर लिलामीमा राख्ने, क–कसले उठाउन पाउने ?
काठमाण्डौ । नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ८० हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमार्फत बेच्ने भएको छ। संस्थाले यी चैत ३१ गतेबाट ८० हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राख्ने भएको हो। लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक वा जोकोही व्यक्ति, कम्पनी, संघसंस्थाहरुले खरिद आवेदन दिन सक्नेछन्। लिलामीमा राखिने सेयरमूल्य...
नेशनल माइक्रोफाइनान्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो सातौँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। संस्थाको गत फागुन ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो चैत ५ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा धादिङको धादिङबेसीस्थित क्रिक रिसोर्टमा बिहान १० बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि...